I-DEADPOOL 3 YONKE IPROJEKTHI, ENTSHA [I-CAST], INDAWO ENOMDLA, AMATHUBA, I-VILLAIN, YONKE INKCUKACHA EYODWA OMELE UYAZI - IIMUVI
Njengoko iFox neDisney zidityanisiwe, i-X franchise- amadoda- abuyele kubaphathi beMarvel. Ngu X lowo
Njengoko iFox neDisney zidityanisiwe, i-X franchise- amadoda- abuyele kubaphathi beMarvel. Yilaa madoda e-X ngoku aphantsi kweDisney. Oku kuthetha ukuba i-Dark Pheonix yeyona bhanyabhanya yesibini ngobukhulu ephuculwe nguFox, eneNew Mutants ngenxa yokukhutshwa ngo-2020.
phi ukubukela uluhlu lwabamnyama ixesha lesi-8
Emva kwempumelelo ye-Deadpool 2 emva kwi-2018, abalandeli ngokucacileyo balindile kwaye balindele I-Deadpool 3 ukukhupha ngokukhawuleza. Kodwa ngoku abalandeli banexhala lokuba inokwenzeka ngenxa yokudibana kukaFox noDisney. Kodwa, ababhali be-Deadpool 1 kunye no-2, uRhett Reese noPaul Wernick, baqinisekisile ukuba i-Deadpool 3 iza kuza ngokuqinisekileyo.
URyan Reynolds, odlala i-Deadpool, uthumele umfanekiso kwi-Instagram ngaphandle kwee-studio zeMarvel. Wachaza umfanekiso ngokwenza ihlaya ukuba waphicothwa uHoward Stark kwaye akayifumana. Isigaba sesine se-MCU sele sibhengeze ukuba i-Deadpool 3 inokuba yinxalenye yesiGaba sesihlanu.
I-Deadpool 3: Iya kuba yintoni iPloti?
Iinkcukacha malunga ibali kunye nebali okanye abalinganiswa abakavezwa okwangoku, kodwa bekukho ukungathandabuzeki ukuba imovie iya kulinganiswa nge-PG- 13 okanye ikalwe njengelinye icandelo okanye cha. I-Deadpool 1 kunye ne-Deadpool 2, kunye neLogan zilinganisiwe. Babephumelele kakhulu njengoko bezuze kakuhle, kwaye impendulo yabaphulaphuli nayo yayintle kakhulu.
Okoko kukho Akukho siqinisekiso sebali bhanyabhanya, kodwa ngokwamacebo anikwe nguRyan Reynolds, kunokuthiwa mhlawumbi ixesha lokuhamba liza kudlala indima ebalulekileyo kwi-Deadpool 3. Kananjalo, inokuthi iqhubeke ibali laseChabel ngokwazisa intombi yakhe. Kwakhona kuya kubakho indawo eyahluke ngokupheleleyo. Icebo eliphambili kunye nomhla wokukhutshwa awukatyhilwa okwangoku. Kodwa kunokuthiwa ngamacebo i-Deadpool 3 iya kuba yinto enkulu njenge-Deadpool 1 kunye ne-2.
jujutsu kaisen ixesha lesi-2 isiqendu 1 sokukhutshwa komhla
I-Deadpool 3: Ngoobani abakhoyo kwi-Cast?
Kucace gca ukuba URyan Reynolds uya kubakho ngokuqinisekileyo kwi-cast ye-Deadpool 3 kwaye uza kuyenza indima yakhe njengo-Wade Wilson. Akubangakho sibhengezo sisemthethweni kwindlu yokuvelisa malunga nokubuyisa. Kodwa uRyan wathi uHugh Jackman naye uza kudlala indima yeWolverine. Iimpawu ezifana neCable (Josh Brolin) kunye noDomino (uZazie Beetz) nazo zingavela.
Ke ikamva le-Deadpool lixhomekeke ikakhulu kubaphathi bokudala. Nangona abenzi bengayichazanga imihla njengangoku, kubonakala ngathi i-Deadpool 3 iyakuthatha ixesha elide ukuba ikhutshwe.
Rick and Morty Ixesha lesi-4 Isiqendu 6 Umhla wokuKhutshwa kunye neTreyini ebonakala ngathi ityhilwe ngaMalungu [eCAST], aBanomdla [ABANGABONI], iiBond ezintsha kunye nezinye ezininzi.
Joker 2 Yintoni omele uyazi? Yonke into malunga neMovie ezizayo kunye neNqwelomoya, kunye noHlaziyo lwamva nje
Isiphelo seXesha elimnyama lidlulile kwi-Avatar kaJames Cameron kwiBhokisi yeOfisi yaphinda yaphinda yabonwa?
UTaylor Swift kunye newayini kunye nabahlobo kwizandla kuMbulelo!
Okulindelwe kakhulu nguJames Bond 'Alikho ixesha lokuSweleka' eliya kusenza ukuba silinde ixesha elincinci njengoko kungoku nje kukhutshwa iiNguqu zikaNovemba
bna isizini 2 umhla wokukhutshwa
umhla wokukhutshwa wendlu yamakhadi
I-amazon rick kunye nexesha lokudaka 3
khwaza umhla wokukhutshwa kwe-5 bhanyabhanya
isiqendu 3 umhla wokukhutshwa
yeyiphi iodolo yokubukela umhlali bhanyabhanya